Sidee daruuraha u samaystaan ​​| Saadaasha Shabakadda
Sidee daruuraha u samaysmaan
Monica Sanchez | | Daruuro
ka daruuraha Kaliya uma adeegi karaan il ahaan waxyi lagu qoro, maxaa diidaya, gabay ama sheeko. Inkasta oo aan badanaa sifiican loo arkin, gaar ahaan xilliga kuleylaha ee waxa aad rabto ay tahay inaad ku raaxaysato qorraxda, xaqiiqadu waxay tahay iyaga la'aantood nolosha adduunkeennu uma badnaadeen inay soo muuqdeen, maxaa yeelay si aan u noolaano, sidaan ognahay , biyuhu waa lama huraan.
Laakiin, Weligaa ma isweydiisay sida daruuraha u samaysmaan? Hadday sidaas tahay, sii wad akhriska waanan kuu sharixi doonaa.
1 Samaynta daruuraha
2 Noocyada daruuraha
Daruuruhu waxay samaysmaan markay hawadu kacdo diirimaadka ay Neefsashada dhulka. Markay kululaato, hawadu way kacdaa wayna kacdaa ilaa ay ka gaarto bartiisa dharabka, taas oo ah marka uumiga biyuhu isku uruuro dhibco aad u yar oo biyo ah ama kiristaalo baraf ah. Dhibco-yaashan, oo leh qaab wareeg ah oo cabirkoodu u dhexeeyo 0,004 iyo 0,1mm, waxay ku jiraan dhaqdhaqaaq isdaba-joog ah marka hawada laga joojiyo iyo marka la hoos geeyo mowjadaha kor u kaca, sidaa darteed way isku dhacayaan oo si wada jir ah ayey isu uruurinayaan. Waxay kuxirantahay xaaladaha cimilada, kororka dhumucdooda waxay ku dhici kartaa qaab sababa inay diidaan.
Dhaqdhaqaaqa hawadu wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa samaynta daruuraha, maadaama, tusaale ahaan, haddii laga dhex abuuro dabaylaha ama hawo leh cusboonaysiin xoog leh waxay yeelan doonaan horumarin toosan, halka haddii lagu abuuro hawo nasasho, waxay ka soo muuqan doonaan lakab ama lakab Sidaas awgeed, saddex nooc oo daruuro ah ayaa la kala saaraa: sare, dhexdhexaad iyo hoose:
Sare: badiyaa waxay leeyihiin muuqaal baal shimbir ah. Waxay ku samaysmaan dherer u dhexeeya 7 iyo 13 km, mana soo degdegaan, laakiin waxay noqon karaan tilmaan-bixiyaha isbeddelka waqtiga. Abtirsiinta aan halkaan ka helno waa Cirrus, Cirrocumulus iyo Cirrostratus.
Medias: waa kuwa gebi ahaanba ama qayb ahaan cirka daboolaya, oo leh muuqaal xajmi ah ama muuqaal isku mid ah leh. Waxay ku samaysmaan dherer u dhexeeya 3 iyo 6 km, mana soo degdegaan. Abtirsiinta aan halkaan ka helno waa Altocumulus iyo Alstrostratus.
Hooseeya: waxay leeyihiin muuqaal cudbi leh, wayna di’i karaan haddii ay ku jiraan joog hoose oo ay leeyihiin horumar toosan oo weyn. Waxay ku samaysan yihiin joog ka hooseeya 3km. Abtirsiinta aan halkaan ka helno waa Stratus, Cumulus, Cumulonimbus.
Daruuraha waa wax aad u xiiso badan, miyaadan u malayn? 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Sidee daruuraha u samaysmaan
cajaa'ib leh iyo ugaarsi
Ku jawaab guuleyste
Waa wax aad u xiiso badan laakiin waxaan jeclaan lahaa wikipedia inay ahaato Ingiriis sidoo kale
Jawaab Deysi Domínguez
Khubarada ayaa ka argagaxay sameynta harooyinka buluugga ah ee Antarctica
Duufaanta Mindulle ayaa ku dhacday Japan